ओलीका दुई विकल्प : बालकोटमा आराम गर्ने कि गुट चलाउने ? – Paluwa Khabar
फागुण १२, २०७७ बुधबार 26
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको छ ।
सत्ताच्युत भएसँगै अब ओलीले चलाउने नेकपाको गुटसमेत धरासायी बन्ने मनोवैज्ञानिक संकेत देखिएको छ ।
संसद् विघटनलगत्तै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका घनश्याम भुसाल केपी ओलीले घाइते बनाएको पार्टी एकता जोगिनेमा बढी नै विश्वस्त देखिएका छन्् । ‘
अब हामी यता र उताको नभनी नेकपा एक ढिक्का बनाएरै लैजान्छौं,’ भुसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टी एक ढिक्का बनाएर लैजान कहाँ–कहाँ र के–के गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै हुन्छ ।’
तर, ओलीले राजीनामा नदिँदा भने उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसलाई पारित गर्न संसदमा नेपाली कांग्रेस र
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि समीकरणको सरकार बनाउने खेल शुरु हुने नेताहरु बताउँछन् ।
ओली निकट नेता महेश बस्नेत पनि राजनीतिलाई विकृत बनाउनबाट जोगाउन अब नेकपा एकताको विकल्प उचित भएको स्वीकार गर्छन् ।
‘मुलुकचाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको दिशातिर जाने सम्भावना बढ्यो । नयाँ–नयाँ समीकरण बन्ने र भत्कने दिशातिर जाने सम्भावना बढ्यो,’ बस्नेत भन्छन्, ‘नेताहरुले सुझबुझपूर्ण ढंगले फैसला गर्नु राम्रो हुन्छ ।
विभाजित नेकपाभित्रको एकता प्रक्रिया जगाउनुपर्छ । बामदेव कमरेडहरुको क्रियाशीलता जति बढ्यो, त्यति नै राम्रो गर्ला ।’
त्यसो त निर्वाचतन आयोगले पनि गत माघ ११ गते गरेको निर्णयमा नेकपाको फुटलाई बैधता दिएको छैन ।
यो अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए भने प्रचण्ड–माधवको नेतृत्वमा पार्टीले एकल बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
पार्टीभित्रको कलहकै कारण संविधान कुल्चने प्रयास गरेका ओलीले तत्काल कस्तो कदम चाल्छन् ? त्यसतर्फ आम चासो छ । प्रमुख दलका नेताहरुले तत्काल राजीनामा दिन ओलीलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।
चितवनबाटै प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीले तत्काल राजीनामा नदिए अझ बढी दुर्गति हुने चेतावनी नै दिएका छन् । अन्य दलका नेताहरुले ओलीले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
ओली समूहबाहेक राष्ट्रिय दलका नेताहरुले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन् । संसद् पुनर्स्थापना भए पनि ठीक र नभए पनि ठीक भन्ने विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
संसद् भंग हुनासाथ यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरेकाले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने कांग्रेसले वक्तव्य मार्फत् प्रतिक्रिया दिएको छ ।
संसदको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताले पनि संसद् पुनर्स्थापना प्रति खुशीयाली मनाएका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दिल्लीमा उपचारत पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसद् पुनर्स्थापना पछि रोगै निको भएको जस्तो अनुभूति साटेका छन् । कडा टिप्पणीसहित भट्टराइको भनाइ छ– भष्मासुरले बध गरेको लोकतन्त्र सर्वोच्चले बचायो ।
संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा प्रखर रुपमा उत्रिएका नेता गगन थापा आगामी दिनमा यस्तो कर्म कसैले नगरोस् भन्ने सन्देश दिन पनि सन्देश दिइनुपर्ने बताउँछन् ।
‘संविधानमाथि अपराध गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ । उनीहरुलाई दण्ड दिइएन भने भालि पनि यस्तो दोहोरिन सक्छ’, उनी भन्छन् ।
Prevकसरी अघि बढ्छ अबको प्रक्रिया ?
Nextप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रा’ जीनामा दिदै ?